Izindaba - Woza uzofunda ngami ngebhokisi lezintamo ezintathu
Woza uzofunda ngami ngebhokisi lezintamo ezintathu
Ibhokisi lemilomo emithathu iyinsimbi ejwayelekile yengilazi yamakhemikhali, esetshenziswa kakhulu ekuhlolweni kwe-organic chemistry.
Ibhodlela lezintamo ezintathuimvamisa iba nesisu esiyindilinga nentamo ezacile. Inezikhala ezintathu, futhi ungangeza ama-reactants amaningi ngasikhathi sinye, noma ungangeza amashubhu we-condensing. Ukuvuleka kwaso okuncane kusetshenziselwa ukuvimbela isixazululo ekuqhamukeni noma ekwehliseni ukuhwamuka kwesisombululo, futhi singasetshenziswa ngepulaki lenjoloba, ukuxhuma eminye imishini yeglasi. Ibhodlela livame ukusetshenziswa lapho isixazululo sidinga ukusabela isikhathi eside noma lapho sifudunyezwa nge-reflux. Ukuvulwa kwebhodlela akuphumi njenge-beaker, ngakho-ke isixazululo kungenzeka sigeleze siphume ngaphandle kwebhodlela lapho sithelwa, ngakho-ke induku yengilazi ivame ukusetshenziselwa ukuthinta phezulu kwebhodlela ukuvimbela ukuthi isisombululo singagobhozi phansi ngaphandle. Ngoba umlomo webhodlela mncane kakhulu, ayifanele ukuhlangana kwengilazi. Uma udinga ukugovuza, ungabamba umlomo webhodlela bese uvula isihlakala sakho kancane ukuze ushukumise kahle nangokulinganayo, noma usebenzise umxube okhethekile. Lapho i-reflux ishiswa, i-magnetic agitator ingafakwa ebhodleleni ukuze ivuse nge-agitator evuthayo
(1) uma ukusetshenziswa kokushisa okuvulekile, kufanele kubekwe ekushiseni kwenetha kwe-asbestosi, ukuze kufudunyezwe ngokulinganayo; Lapho kufudunyezwa, udonga olungaphandle lwebhodlela kufanele lungabi namaconsi amanzi.
(2) naka ukubekwa uphawu kwesikhombimsebenzisi esineqhwa lapho usebenzisa.
(1) Isiphenduli esiphakathi kuketshezi nokuqinile noma uketshezi.
(2) Ukuhlanganiswa kwegesi yokuphendula igesi (izinga lokushisa elijwayelekile, ukushisa).
(3) i-distillation noma i-fractionation yeziphuzo (ezinama-flasks ama-branched eyaziwa nangokuthi ama-distillation flasks).
(4) Ngokuphendula okuphilayo ngemibandela eqinile.
(1) Uketshezi olufakiwe alungeqi ku-2/3 wevolumu yalo.
(2) ukusetshenziswa kwe-asbestos net lapho kufudunyezwa, ukuze ukushisa okufanayo.
(3) i-distillation noma i-fractionation kufanele isetshenziswe nge-plug yerabha, i-catheter, i-condenser, njll.
Ukukhiqizwa kwebhodlela elinemilomo emithathu nokwenziwe ngemilomo eminingi kwenziwa ngokushaya umzimba we-flask ngesikhunta somlomo omfushane nentamo yomlomo osindayo esithandweni somlilo esikhulu, bese kushisela ihlombe lomzimba ngamunye webhokisi kulowo owenza isibani. Ibhokisi lemilomo elinemilomo eminingi liyintamo emfushane, umlomo ojiyile, iflask engezansi eyindilinga, emzimbeni webhodlela ozungeze ihlombe eliboshwe ngezintambo ezintathu (ezintathu zentamo), ezine (ezine zentamo). I-engela yentamo ihlukaniswe yaba intamo eqondile kanye ne-torticollis. I-Multi-port, ikakhulukazi ukubambisana nokusebenza okuyinkimbinkimbi kokuhlola, ingahlanganisa izinsimbi eziningi ezisekelayo ngasikhathi sinye. Ukuqina komlomo, ngoba zonke izinhlobo zezesekeli zingamadivayisi amile, igebe lesikhungo sebhodlela likhulu, kulula ukugqugquzela isixazululo, akulula ukulimaza ezinye izingxenye zensimbi nokuklama, kepha okubi kwalo ukuthi indawo yebhola incane, umgogodla phakathi kokuvala, akulula ukufaka ezinye izingxenye zensimbi, ikakhulukazi imininingwane engezansi kwe-500mL inzima kakhulu. IBevel, ngenxa yobukhona be-Angle Bevel (10° Wotho noma 2 engela ukunwetshwa), yokudla kungenziwa ngqo futhi ngokulinganayo wanezela ezansi isikhungo ibhodlela. Ingaphezulu lomzimba webhodlela libuye libe yisisekelo sokuhlangana kwezinsiza kusebenza ezahlukahlukene. Ngenxa yegebe elikhulu lehlombe kanye nebanga elikhulu phakathi komlomo nentamo yebhodlela, kulula ukuyifaka, ikakhulukazi iflaski elincane. Kepha isikhungo esingezansi kwesikhala sebhodlela sincane, kunzima ukushukumisa, kulula ukulimaza ezinye izesekeli nezinsimbi.
Ngokuyisisekelo iyafana nebhokisi elizungezayo-phansi, kepha ngenxa yomlomo wayo ojiyile, intamo emfushane nomlomo omningi, izesekeli zokufaka zingakhuphuka, futhi ukufakwa kusindisa abasebenzi futhi kulula. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ibha yokuxuba ifakwa maphakathi nomlomo, kufakwa i-fannel ehambisa uketshezi emlonyeni ohlangothini, kufakwa ithubhu le-fractionation kanye ne-condensing tube emlonyeni ohlangothini, bese kufakwa i-thermometer emlonyeni ohlangothini.
Kufanelekile ukuhlanganiswa kwezinto eziphilayo elabhoratri, noma imisebenzi eyinkimbinkimbi yokubilisa, yokuhlukanisa nokuhlanza. Imvamisa ihlanganiswa ibe yidivayisi yokuhlukanisa izingcezu, i-distillation device noma i-reflux device enama-thermometer, amashubhu ajiyisayo, imigoqo evuselelayo, i-faneli ketshezi nezinye izinsimbi. I-250-3000ml isetshenziselwa ukuhlaziywa njalo kanti i-5000-10000ml isetshenziselwa ukukhiqizwa kweqoqo elincane lezimboni.
U-Huida unolwazi lweminyaka eminingi ekukhiqizeni nasekusebenzeni kwe umumo we-flask oblique. Ulayini womkhiqizo ucebile futhi ungahlangabezana neningi le-umumo we-flask oblique izinhlelo zokusebenza zokuhlola. Woza ukhethe imikhiqizo efanele yezinhlelo zakho zokusebenza zokuhlola.